Senate-ka Mareykanka oo ansixiyey sharci $2 tirilyon ah
Hoggaamiyaha Aqlabaiyadda Senate-ka Mitch McConnel
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa ansixiyey sharciga xirmo dhaqaale ah oo ka kooban laba tirilyon oo dollar oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata-bixinayo saameynta xooggan ee uu ku yeeshay cudurka Coronavirus.
Kadib wada-xaajoodyo kulul, ayey meel isugu yimaadeen xubnaha Aqalka Senate-ka ee sida aadka ah u kala qeybsan, waxayna ku meel-mariyeen sharciga codad ah 96-0, ayaga oo u diray Aqalka Wakiilada oo la filayo inuu u codeeyo Jimcaha.
Madaxweyne Trump, oo kaaliyayaashiisa sare ay gacan ka geysteen wada-xaajoodyada sharcigan, ayaa ballan-qaaday inuu deg deg u saxiixi doono marka lasoo saaro miiskiisa. “Horey ayaan ka saxiixi doonaa,” ayuu Trump u sheegay weriyayaasha.
Xirmadan dhaqaale ayaa la filayaa in 500 oo bilyan oo dollar oo ka mid ah lagu caawiyo shirkadaha uu sida xooggan uu u saameeyey cudurka Coronavirus, ayada oo qoysaska Mareykankana ay heli doonaan jeeg lacageed oo toos uga imanaya dowladda.
Waxaa sidoo kale xirmada ku jira 350 bilyan oo dollar oo la siinayo ganacsiyada yaryar, iyo 250 bilyan oo loogu talo-galay in la siiyo dadka ay shaqo la’aanta ku dhacdo, inta ay shaqo ka helayaan.
100 bilyan oo dollar ayaa iyana laga siin doonaa isbitaalada iyo nidaamyada caafimaadka dalka, halka 150 bilyan ay aadi doonto gobollada iyo dowladaha hoose, si ay ula dagaalamaan faafitaanka cudurka.